Shuruudaha Guud ee Adeegga | Simrani
Shuruudaha guud iyo xaaladaha dukaanka internetka ee ‘Simrani’
§1 Ku habboonaanta ganacsatada iyo qeexidda ereyada
(1) Shuruudaha iyo shuruudaha guud ee soosocda ayaa quseeya dhamman gudbinta annaga iyo macaamilka nooca nooca ah ee shaqeynaya waqtiga amarku. Macaamilku waa qofkasta oo dabiici ah oo ku dhammeeya macaamil ganacsi sharci ah ujeedooyin ahaan inta badan aan lagu salayn karin ganacsigooda iyo howlahooda xirfadeed ee madaxbannaan (§ 13 BGB).
§2 Samaynta heshiiska, kaydinta qoraalka heshiiska
(1) Xeerarka soo socda ee ku saabsan gabagabada heshiiska wuxuu khuseeyaa amarrada iyada oo loo marayo dukaankayaga internetka https://simrani.com/wp-admin/post-new.php?post_type=page. (2) Haddii ay dhacdo gabagabada heshiiska, heshiiska ayaa la imanaya
Dukaanka internetka Simrani ee Cawil Mustafa Ibrahim Charlottenburger straße81 D-22045 Nambarka Diiwaangelinta Hamburg
aasaasay. (3) Soo bandhigida alaabada ku jirta dukaankeena internetka ma ahan qandaraas qaanuuneed oo waajib ku ah sharci darrada ah ee qaybteenna ah, laakiin waa casumaad aan khasab ku ahayn macaamiisha inay amraan alaabada. Marka la amro alaabada la doonayo, macmiilku wuxuu soo bandhigayaa dalab adag si uu u gabagabeeyo heshiiska iibka (4) Xeerarka soo socdaa ayaa lagu dabaqaa markii amar laga helo dukaankeena internetka: Macaamilku wuxuu u soo bandhigayaa qandaraas qandaraas ku xiraya isagoo si guul leh u dhammaystiraya habraaca dalbashada ee ku yaal dukaankeena internetka. Amarku wuxuu ka dhacayaa talaabooyinka soo socda
1) Xulo badeecada la doonayo 2) Xaqiiji adoo gujinaya batoonka “Dalbashada” 3) Hubi macluumaadka ku jira galka iibka 4) Riix batoonka “Checkout” 5) Is qor diiwaanka tukaanka internetka kadib diiwaangelinta iyo gelista faahfaahinta codsadaha (cinwaanka e-maylka iyo Furaha). 6) Mar labaad hubso ama saxo xogta la galiyay. 7) Xiritaanka dalabka adoo gujinaya batoonka “ka dalba qarashaadka” ama “iibsada”
Kahor soo gudbinta amarka ee adoo riixaya batoonka “Back” ee ku jira biraawsarka internetka ee ay isticmaalayaan ka dib markay hubiyaan faahfaahintooda, waxay ku laaban karaan websaydhka macluumaadka macaamiisha lagu duubay iyo inay saxaan khaladaadka fikradaha ama iyagoo xiraya. ee biraawsarka internetka si loo joojiyo nidaamka amarka Waxaan ku xaqiijin doonaa helitaanka amarka isla markiiba e-mayl toos loo soo saaray (“xaqiijinta amar”). Tan ayaan ku aqbalnaa dalabkaaga. (5) Kaydinta qoraalka qandaraaska ee amarrada iyada oo loo marayo dukaankayaga internetka: Waxaan kuugu soo diri doonnaa xogta amarka iyo shuruudaha iyo shuruudaha annaga oo emayl ah. Waxaad ka daawan kartaa shuruudaha iyo shuruudaha waqti kasta adoo booqan kara https://simrani.com/wp-admin/post-new.php?post_type=page Sababo amni awgeed, faahfaahinta dalabkaaga mar dambe lagama heli karo internetka.
Prices3 qiimayaasha, qiimaha dhoofinta, bixinta, taariikhda bixinta
(1) Qiimaha la muujiyey waxaa ka mid ah canshuurta iibka sharciga ah iyo qeybaha kale ee qiimaha. Intaa waxaa u dheer, waxaa jira kharashyo dhoofinta. (2) Macaamilku wuxuu leeyahay ikhtiyaarka ah inuu hore u bixiyo, deynta tooska ah, PayPal, kaarka deynta (Visa, Mastercard, American Express). (3) Haddii macaamilku doorto lacag bixinta kahor, wuxuu ku dhaqaaqay inuu bixiyo qiimaha wax iibsiga isla marka uu dhammeeyo heshiiska.
(1) Haddii aan si cad u qeexnay si kale haddii aan ku sifeynno sharraxaadda badeecada, dhammaan waxyaabaha aan soo bandhigno waxay diyaar u yihiin soo diritaan deg deg ah. Gaarsiinta ayaa ugu dambeysay 5 maalmood oo shaqo gudahood. Bangiga mas’uulka ka ah wareejinta iyo dhammaan habab kale oo lacag bixin ah maalinta ku xigta heshiiska la dhammaystiro.Haddii waqtiga kama dambeysta ahi dhammaado Sabtida, Axadda ama fasaxyada dadweynaha meesha lagu keenayo, waqtiga loo qabtay ayaa ku eg maalinta shaqo ee xigta. (2) Khatarta shilka shilka iyo shil la’aanta shilalka sheyga ayaa sidoo kale loo gudbiyaa iibsadaha kaliya marka sheyga lagu wareejiyo iibsadaha.
§5 haynta cinwaanka
Waxaan u hayneynaa lahaanshaha badeecada ilaa inta laga bixinayo qiimaha iibsashada. *** ***
6 Xuquuqda ka-noqoshada macaamilka macaamil ahaan:
Xuquuqda ka bixitaanka macaamiisha Macaamiilku wuxuu xaq u leeyahay ka laabashada sida ku xusan qodobka soo socda, kaas oo macaamiilku uu yahay qof kasta oo dabiici ah oo ku soo gabagabeynaya macaamil ganacsi sharci ah ujeedooyin lagu saarin karo ganacsigooda ama howlahooda xirfadeed ee madaxa bannaan:
Nidaamka ka noqoshada
Xuquuqda ka bixista Waxaad xaq u leedahay inaad baajiso heshiiskan shan maalmood gudahooda adoon bixin wax sabab ah. Xilliga la joojintu waa afar iyo toban maalmood laga bilaabo maalinta adiga ama qof saddexaad oo aad adigu magacowday, oo aan ahayn siddee, uu qabsaday alaabtii. Si aad u isticmaasho xuquuqdaada ka laabashada, waa inaad